Vehivavy ampy torimaso, mazoto miray kokoa
Ireo fofona natoralin’ny fivaviana
“Andro vitsivitsy izay, rehefa miray ara-nofo izahay mivady, dia maheno fofona mahery izany aho. Inona no mahatonga an’izany?” Nomena 28 taona
Ireo fihetsika ataon’ny vehivavy fa tsy tian’ny lehilahy !
Mba hankamamiana tanteraka ny fotoana hifampizaràna mandritra ny firaisana ara-nofo dia tokony samy hahay handanjalanja ny fihetsiny, na ny vehivavy na ny lehilahy. Ho an’ny vehivavy anaty tokantrano, ireto mety hanampy anao, izay sady fisorohana ilay antsoina hoe : « routine ».
Im-piry isan'andro vao afa-po ny lehilahy ?
Raha ny fiheverana amin’ny ankapobeny dia mitady firaisana ara-nofo betsaka kokoa noho ny vehivavy ny lehilahy.
Fehezan-teny 5 hanitikitika ny filàny !
Fitaovana iray mafonja mihitsy ny teny, raha te hanaitaitra ilay olon-tiana. Mazàna anefa no tsy dia mahita ambara loatra ny vehivavy eo amin'io lafiny io, nefa isan'ny andrasan'ny lehilahy amintsika ny hamoahana ny ao am-po. Ireto misy fehezan-teny 5 hanohina ny fony no sady hanaitra ny filàny.
Firaisana ara-nofo…mampisaraka mpivady raha tsy ampy!
Voalaza fa isan'ny antony iray tena mahatonga ny fisaraham-panambadia­na ny tsy fahampian'ny firaisana ara-nofo.
Maro dia maro ireo voalaza fa voka-tsoa azo avy amin’ny fahampian’ny torimaso sy ny kalitaon’izany.
Fikarohana vao nivoaka vao haingana kosa no nanampy tombontsoa iray hafa, azo avy amin’ny fatoriana tsara. Araka ny nambaran’ny manam-pahaizana amerikanina, avy ao amin’ny oniversiten’i Floride tokoa mantsy, dia mahatsara ny fiainam-pananahana ny fahampian’ny torimaso…
Mitombo ny filàna sy ny fahafinaretana
Araka ny nambaran’ny Dr Laurie Mintz, manam-pahaizana momba ny firaisana ara-nofo, dia mampitombo kokoa ny tahan’ny filàna ara-nofo ny fahampian’ny torimaso. Mahalafatra kokoa ny fahafinaretana azo mandritra izany ihany koa, ny fanana torimaso ampy sy ara-dalàna. Nohazavainy fa teo am-pandinihana an’ireo olona tonga manatona azy, noho ny olana ara-nofo, no nahatsikaretany an’izany ary avy eo dia nohalalininy manokana ny momba ny fifandraisan’ny torimaso sy ny fiainam-pananahana.
Porofo anankiray tsy azo lavina noraisin’ity manam-pahaizana momba ny firaisana ara-nofo ity ny an’ireo renim-pianakaviana. Ao aloha ireo vao tera-bao, izay mbola tsy manana faniriana ara-nofo noho ny harerahana taorian’ny fiterahana sy noho ny tsiry mpanentana mbola mikorontana, fa eo ihany koa ny tsy fahampian-torimaso vokatry ny fitaizana. Tsy ireo reny vao tera-bao ihany no lasa manana olana eo amin’ny fiainam-pananahana, izay miseho amin’ny fielanelanan’ny fotoana hanaovana firaisana ara-nofo, fa ny ray aman-dreny maro mihitsy, noho ny hareraham-batana sy ny fiasan-tsaina, izay mitarika tsy fahalavorarian’ny torimaso.
Mikorontana ny tsiry mpanentana
Araka ny fanazavana ara-tsiantifika dia mampiakatra ny tsiry mpanentana atao hoe : “cortisol”, izay avoakan’ny vatana rehefa tratran’ny rarin-tsaina, ny tsy fahampian’ny torimaso. Ny « cortisol » anefa dia mampihena ny tahan’ny « testosterone ». Ity tsiry mpanentana ity indray no tomponandraikitry ny faniriana ara-nofo, na eo amin’ny lehilahy, na eo amin’ny vehivavy. Tsikaritr’ilay manam-pahaizana momba ny firaisana ara-nofo ary fa isaky ny ora iray azon’ny vehivavy amin’ny torimaso, dia miakatra 14% ny fahazotoany miray ara-nofo. Araka izany, raha toa ka manana olana eo amin’ny filàna, dia jereo ihany hoe : ampy ve ny torimasonao ?!